अयोग्य झा फेरि दूरसञ्चारको अध्यक्षमा नियुक्त ! - Everest Dainik - News from Nepal
अयोग्य झा फेरि दूरसञ्चारको अध्यक्षमा नियुक्त !
काठमाडौं, भदौ २३ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विवादित छविका दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुनः नियुक्ति गरेका छन् ।
विभागीय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि) मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा इथियोपिया गएका बेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिला अयोग्य भनेका झालाई पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको एक मन्त्रीले बताए ।
याे पनि पढ्नुस दशैँअगावै तार व्यवस्थित नगरे प्राधिकरण आफैँले हटाइदिने
दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने एक प्रस्ताव छ । तपाइहरुको अरु कोही छ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, अन्य कोही पनि मन्त्री बोल्नुभएन ।
यसअघि आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो । त्यस दिन केही मन्त्रीले सो प्रसतावको चर्को आलोचना गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिको सम्बन्धन खारेज
ट्याग्स: Digambar Jha, दिगम्बर झा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण